स्वास्थ्य Archives - Page 154 of 171 - Purbeli News
यदि तपाइँलाई मोटो पनले सताएको छ वा भुँडी लागेर चिन्तित हुनुहनुन्छ भने पक्कै पनि भुँडी घटाउने उपाय खोजिरहनु भएको होला । कतिपयले भुँडी घटाउन भन्दै रोटी खाने गर्छन् भने कसैले भातले भुँडी नबढ्ने भन्दै भात खान्छन् । कतिलाई त अझ भात नखाइ पेट नै नभरिने समस्या हुन्छ । धेरै मानिसलाई रोटी खाँदा भुँडी घट्छ भन्ने लागेपनि यसबारेमा मानिसहरुलाई स्पष्...
पछिल्लो समय मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्याका कारण विभिन्न रोगहरु फैलिएका छन् । आम जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शहरी क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्र बनाएर थुप्रै निजी अस्पताल खुल्ने क्रम जारी छ । आम जनतलाई सेवा सुविधा दिने अस्पतालहरु आफ्नो अस्पतालमा के कस्तो तलब सुविधाहरु लिएर काम गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न...
झापा । झापामा आव २०७३÷०७४ मा ५८ मिर्गौला रोगी थपिए छन् । जसमा १९ महिला र ३९ पुरुष छन् । उनीहरुले साताको दुई पटकसम्म नियमित हेमोडायलासिस गर्नुपर्छ । मिर्गौला रोगीका लागि सरकारले निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि मिर्गौला रोगीले अझैसम्म निःशुल्क सेवा लिन पाएका छैनन । हेमोडायलासिस गराउन महिनामा करिव रु २४ हजार खर्च हुन्छ । सरकार...
यी हुन् यौन शक्ति तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी
यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ ।तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई स...
यी हुन् लामुखट्टेबाट छुटकारा दिलाउने फूलहरु
काठमाडौँ। गर्मी महिनामा लामुखट्टेले सार्है दु :ख दिने गर्छ। लामुखट्टे भगाउन हामी धुप बाल्ने,झुल टाँग्नेदेखि बिहिन्न उपाय अपनाउछौ।धुप बाल्नाले लामुखट्टेतबाट त छुटकारा पाउन सकौला तर ,धुपले पनिहाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ ।भने झुल तान्ग्नाले गर्मीले सुत्नै सकिदैन । यदि यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुहोस् । गमलामा राख्न सकिने केही बिरुवाले लामुखट्टे भगा...
बुधबार, जेठ ०३, २०७४
यदि तपाइँलाई मोटो पनले सताएको छ वा भुँडी लागेर चिन्तित हुनुहनुन्छ भने पक्कै पनि भुँडी घटाउने उपाय खोजिरहनु भएको होला । के भात खाँदा भुँडी बढ्छ ? कतिपयले भुँडी घटाउन भन्दै रोटी खाने गर्छन् भने कसैले भातले भुँडी नबढ्ने भन्दै भात खान्छन् । कतिलाई त अझ भात नखाइ पेट नै नभरिने समस्या हुन्छ । धेरै मानिसलाई रोटी खाँदा भुँडी घट्छ भन्ने लागेपनि यसबारेमा मा...
धनुषा । जनकपुरका औषधि पसलमा स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले अनुगमन गरेको छ । मङ्गलबार बेलुकादेखि विभागबाट आएको सातजनाको टोलीले अनुगमन थालेको हो । टोलीले अनुगमन थालेपछि अवैध तरिकाले सञ्चालित औषधि पसल धमाधम बन्द गरेर पसले फरार भएका छन् । बिनादर्ता सञ्चालित औषधि पसल र प्रतिबन्धित औषधिको विषयमा अनुगमन गरेको टोलीका ड्रग इन्स्पेक्टर डा चन्देश्वर यादवले जान...
यी हुन् आँखामुनि कालो धब्बा आउने प्रमुख ७ कारण
आँखामुनि कालो धब्बा आउनुको कारण अनिन्द्रा ठानिन्छ । प्रशस्त सुत्नु निकै महत्वपूर्ण भए पनि निन्द्राको अभावले मात्र आँखामा काला र निला धर्सा आउँदैनन् । यसका अन्य कारण छन्ः आँखामुनि कालो धब्बा आउनुका ७ कारण यस्ता छन् : १. खराब जीन हो तपाईको आँखामा कालो धर्सा र दाग हुनुको दोष अभिभावकलाई पनि जान्छ । ‘वंशानुगत कारणले कतिपय मानिसको आँखामा काला धर्सा र ...
यी हुन् गर्मी मौसममा बच्चाको हेरचाह गर्ने ७ तरिका
मंगलबार, जेठ ०२, २०७४
जाडो सकिएर गर्मी मौसम सुरु भैसकेको छ । मौसम परिवर्तनसँगै यो बेला बच्चाहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यस्तो मौसममा बच्चालाई घमौरा र घाउ-खटिरा आउने, धेरै पसिना आएर चिसो लाग्ने, बढी गर्मीले एलर्जी हुने जस्ता समस्या देखा पर्छ । त्यसैले गर्मीमा बालबालिकाको हेरचाह गर्दा निम्न कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। १.सहज पहिरन लगाइदिने गर्मीमा बच्चालाई सुती कप...
चितवन । चितवनको भरतपुरमा स्थापना भएको मनकामना अस्पतालले स्वास्थ्य कार्ड लिएका बिरामीलाई २० प्रतिशत छुटमा उपचार गर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थापनसँगै सुविधायुक्त अस्पतालका रुपमा विकास गरिएको उक्त अस्पतालले पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा यस्तो घोषणा गरेको हो । आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालका अध्यक्ष प्रा डा अर्जुन श्रेष्ठले न्यून आय भएका बिरामी...